घर » होटल र रिसोर्ट समाचारहरू » होटल ईतिहास: एशियाई अमेरिकी होटल मालिक संघ
एशियाई अमेरिकी होटल मालिक संघ (AAHOA) एक ट्रेड एसोसिएसन हो कि होटेल मालिकहरुको प्रतिनिधित्व गर्दछ। २०१ 2018 सम्म, एएएचओएका लगभग १,18,000,००० सदस्यहरू छन् जसले संयुक्त राज्यमा आधा 50,000०,००० होटेलहरूको अविश्वसनीय स्वामित्व राख्छन्। यदि तपाइँले यो कुरा मनमा राख्नुभयो कि अमेरिकी अमेरिकीहरू एक प्रतिशत अमेरिकी भन्दा कम जनसंख्याको हिस्सा छन् भने, यस व्यवसाय को विजय असाधारण छ। यसबाहेक, सबै भारतीय होटेल मालिकहरूको लगभग ०% लाई पटेल भनिन्छ, उपनामले तिनीहरू गुजराती हिन्दू उपसमूहका सदस्य हुन् भनेर देखाउँदछ।
यो आर्थिक चमत्कार कसरी भयो? भनिन्छ कि संयुक्त राज्य अमेरिकामा पहिलो भारतीय मोटेल मालिक कानजीभाई देसाई नाम गरेको अवैध आप्रवासी थिए जसले १ who .० को दशकको शुरुमा शहरको सान फ्रान्सिस्कोमा गोल्डफिल्ड होटेल किन्न सफल भएका थिए।
त्यसको छब्बीस वर्ष पछि १ 1949। In मा, भारतीय वंशका अर्का एशियाली अमेरिकी भारतबाट कानूनी आप्रवासको पहिलो लहरमा सूरत शहर नजिकैको आफ्नो घरबाट संयुक्त राज्य अमेरिका आए। भुलाभाई भि। पटेल उत्तरी क्यालिफोर्नियामा खुबानी र अंगूर उठाए र उनले १ 108 in० मा स्यान फ्रान्सिस्कोको १० Willi कोठाको विलियम पेन होटेल किन्न सक्ने समयसम्म विभिन्न जागिरमा काम गरे। १ 1960 1996 By सम्ममा भुलाभाई आफ्नो छोरा रमनसँग उत्तरी क्यालिफोर्नियामा नौ सम्पत्तिको स्वामित्वमा थिए। र नाति प्रमोद। त्यतिबेला उनी भारतीय अमेरिकी बसोबास गर्ने समुदायको तीव्र वृद्धि देखेर छक्क परे। "यो एउटा होटेलबाट सुरु भयो", उनले भने, "अब हामीसँग हजारौं भयो।"
"पटेल" भनेको गुजरातमा किसान वा जमिन मालिक हो जहाँ पटेलहरू मूल र ठूला गोत्र हुन्। कर सlections्कलनलाई सजिलो पार्न बेलायतीहरूले तिनीहरूको “अमीन” (फार्म प्रबन्धकहरू) र अरू “देसाई” (पुस्तकहरू राख्नेहरू) नाम परिवर्तन गरे, पुनः नामकरण गरे र पुन: नामकरण गरे। भनिन्छ कि प्याटेल्सको रगतमा वाणिज्य जीन छ र कथित प्रमाणहरूले यसलाई सहन सकेको छ।
१ 1970 s० को मध्यमा, भारत, अफ्रिका र एशियाबाट पाटेल्स संयुक्त राज्य अमेरिका बसाउन थाले जहाँ कुनै व्यवसायमा $०,००० डलर लगानी गर्न इच्छुक कुनै आप्रवासी स्थायी निवासको लागि आवेदन दिन सक्दछ, जुन नागरिकताको पहिलो चरण हो। त्यस्ता लगानीका लागि सीमित अवसरहरू थिए। रेस्टुरेन्टहरूले हिन्दू गुजरातीहरूलाई मासु, एउटा असहज गतिविधि सम्हाल्न आवश्यक पारे। यसबाहेक, एउटा रेस्टुरेन्टमा पाहुनाहरूसँग एक-अर्कोको अन्तर्क्रिया आवश्यक पर्दछ, नयाँ-आगमन आप्रवासीहरूका लागि गोलमाल। तर विचलित सडकको मोटलहरू $ 40,000 को लागि सिधै अधिग्रहण गर्न सकिन्छ। थप रूपमा, मोटल उद्योग बुरी ढ sl्गले गिर्दो भएको थियो किनभने तेल प्रतिबन्ध र परिणामस्वरूप देशव्यापी पेट्रोलको अभाव।
एक पटेल अग्रगामीले रिपोर्ट गरे कि मोटल “… चालु गर्न सजिलो छ। तपाईलाई अस्वाभाविक अंग्रेजी चाहिदैन, केवल इच्छुकताले लामो घण्टा काम गर्दछ। र, यो एउटा व्यवसाय हो जुन घरसँग आउँदछ - तपाईंले छुट्टै घर किन्नु पर्दैन…। ”
नयाँ मालिकहरूले उनीहरूको व्यवसायिक विशेषज्ञता र उनीहरूका परिवारहरूलाई यी मोटेलहरू सञ्चालन गर्नका लागि ल्याए। सबै महत्त्वपूर्ण नगदी प्रवाहलाई अनुगमन गर्न उनीहरूले आधुनिक लेखा विधिहरू स्थापना गरे। चार पटक नगदी प्रवाह प्याटेल्सको मन्त्र बन्न पुग्यो। यदि विचलित मोटलले प्रति वर्ष १०,००० डलर राजस्व कमाए र $ $०,००० को लागि अधिग्रहण गर्न सक्थे भने यो मेहनती परिवारका लागि लाभदायक थियो।
तिनीहरूले नवीकरण गरे र नगद प्रवाह सुधार गर्न रुन्डउन मोटेल अपग्रेड, सम्पत्ति बेच्न र अझ राम्रो मोटेलमा व्यापार। यो कुनै कठिनाइ बिना थियो। परम्परागत बीमा कम्पनीहरूले कभरेज प्रदान गर्दैनन् किनभने उनीहरू विश्वास गर्छन् कि यी आप्रवासी मालिकहरूले उनीहरूको मोटलहरू जलाउनेछन्। ती दिनहरूमा, बैंकहरूले या त धितो प्रदान गर्ने संभावना थिएन। प्याटेल्सले एक अर्कालाई फाइनान्स गर्नु पर्दथ्यो र उनीहरूको सम्पत्तिहरूको आत्म-बीमा गर्नुपर्‍यो।
जुलाई,, १41999। मा न्यूयोर्क टाइम्स लेखका रिपोर्टर टुंकु वरदराजनले लेखेका छन्, "पहिलो मालिकहरू धेरै आप्रवासी आप्रवासी समूहसँग मिल्दोजुल्दो, झिकिए, बाहिर गए, पुरानो मोजालाई डार्क गरे र कहिले पनि छुट्टी मनाएनन्। तिनीहरूले यो केवल पैसा बचाउनको लागि मात्र गरेनन किनभने बचत पनि एक ठूलो नैतिक संरचनाको अंश हो, जुन सबै अनावश्यक खर्चलाई बेकार र अप्रिय कार्यको रूपमा मान्दछ। हिन्दुधर्मको जरा जत्तिको पाटोहरूले आफ्नो ऐतिहासिक परम्परामा व्यावसायिक परफेक्शनिस्टको रूपमा व्यवहार गर्ने हिन्दू धर्ममा यति जरा गाडेको फ्रिल्स र फ्रिभोलिटीको प्रतिरोधवादी दृष्टिकोणले यो मनोवृत्ति देखाउँदछ। "
तिनीहरूले खरिद गरे, मर्मत गरे, अपरेटेड र मोटेलहरू पुन: बिक्रि गरे मध्य अन्तरराज्यीय राजमार्गहरूमा। चाँडै, "पटेल" नाम होटल व्यवसायको पर्यायवाची भयो। पेन्टेलको क्यान्टन (टेक्सास, मिसिसिपी, मिशिगन र ओहायो), बर्लिंग्टन (भर्मन्ट, आयोवा र उत्तर क्यारोलिना), एथेन्स (जर्जिया, टेनेसी र अलाबामा), प्लेनभ्यू (न्यू योर्क र ओहियो) र लview्गभ्यू सहित सबै अमेरिकाका शहरहरूमा मोटेलहरूको आफ्नै मोटेलहरू छन्। (टेक्सास र वाशिंगटन)
लेखक जोएल मिलम्यान यसमा लेख्छन् अन्य अमेरिकीहरू (वाइकि Books पुस्तकहरू):
"Patels एक निद्रा लाग्यो, परिपक्व उद्योग र यो उल्टो डाउन-उपभोक्ताहरु लाई अधिक विकल्पको प्रस्ताव राखेर सम्पत्तीहरु लाई अधिक लाभदायक बनाउने। आप्रवासी बचतमा अरबौं आकर्षण गर्ने मोटेलहरू धेरै अरबौंको घर जग्गा इक्विटीमा परिणत भए। त्यो इक्विटी, एक नयाँ पीढी द्वारा प्रबंधित, नयाँ व्यवसायहरु मा लाभ उठाईदै छ। केहि बसाई सम्बन्धित छ (निर्माण मोटल आपूर्ति); घर जग्गा सम्बन्धी केहि सम्बन्धित (डिरेलेट हाउजेलका पुनः प्राप्त गर्दै); केही केवल अवसर खोज्ने नगद। पटेल मोटेल मोडेल उदाहरण हो, न्यू योर्कको वेस्ट इंडियन जिटनीजस्ता, आप्रवासी पहलले पाइ विस्तार गर्ने तरीकाको। र त्यहाँ अर्को पाठ छ: अर्थव्यवस्था उत्पादनबाट सेवामा सर्छ, पटेल-मोटल घटनाले फ्रान्चाइजिंगले कसरी बाहिरी व्यक्तिलाई मूलधारको खेलाडीमा बदल्न सक्छ भनेर देखाउँदछ। मोटेलको लागि गुजराती मोडेल ल्याटिनोहरू ल्याण्डस्केपि inमा प्रतिलिपि गर्न सकिन्छ, वेस्ट इंडियनहरूको होमकेयरमा वा एशियन्स लिपिक सेवाहरूमा। पारिवारिक व्यवसायको रूपमा टर्नकी फ्रन्चाइजी सञ्चालन गरेर, आप्रवासीहरूले सेवा प्रदायकहरूको अन्तहीन प्रवाहलाई बढाउन मद्दत गर्दछन्। ”
लगानी र स्वामित्वको विस्तारको क्रममा पाटेल्सलाई विभिन्न किसिमका अपराधहरू लगाइएको थियो: आगजनी, चोरी यात्रा जाँच गर्ने, आप्रवासन सम्बन्धी कानूनहरूको उल्लंघन गर्ने। जेनोफोबियाको अप्रिय फटमा,लगातार फ्लायर पत्रिका (समर १ 1981 11१) ले घोषणा गर्‍यो, “मोटेल उद्योगमा विदेशी लगानी आएको छ… .. अमेरिकी खरिदकर्ता र दलालहरूका लागि गम्भीर समस्याहरूको कारण। ती अमेरिकीहरूले अनुचित, सायद अवैध व्यापारिक व्यवहारको बारेमा गनगन गरिरहेका छन्: साजिशको कुरासमेत भइरहेको छ। " पत्रिकाले गुनासो गरेको छ कि प्याटेल्सले मोटेलको मूल्य कृत्रिम रूपमा बढाएको छ ताकि किनबेच गर्ने उन्माद देखा पर्‍यो। उक्त लेखले एउटा छुट्टै जातिय भेदभावपूर्ण टिप्पणीको साथ टु .्ग्यायो, "मोटेलहरूले करी जस्तो गन्ध आउँदछ र अगाडि डेस्कमा काम गर्नका लागि काकेशियनहरू भाडामा लिने आप्रवासीहरूबारे डार्क इशारा दिन्छ।" उक्त लेखमा यस्तो निष्कर्ष निकालिएको छ, "तथ्यहरू के भनेका छन् कि आप्रवासीहरूले मोटल उद्योगमा हार्डबल खेल्दै छन् र नियम पुस्तकले कडाइकासाथ त्यसो गरेको छैन।" यस्तो जातिवादको सबैभन्दा नराम्रो दृश्य भनेको देशका केही होटेलहरूमा प्रदर्शित "अमेरिकी स्वामित्व भएको" ब्यानरहरूको फटकार थियो। यो घृणित प्रदर्शन पोस्ट सेप्टेम्बर ११ अमेरिकामा दोहोरिएको थियो।
मेरो लेखमा, "कसरी अमेरिकी-स्वामित्व प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ,"लजिंग आतिथ्य, अगस्त २००२), मैले लेखे,
“सेप्टेम्बरमा। ११ अमेरिका, देशभक्ति को संकेत जताततै: झण्डा, नारा, भगवान ब्लेस अमेरिका र यूनाइटेड हामी खडा पोस्टर। दुर्भाग्यवस, कहिले काहिँ यो बहिर्गमनले प्रजातन्त्र र सभ्य व्यवहारको सीमाहरूलाई ओभरप्यास्ट गर्छ। जे भए पनि, साँचो देशभक्तिले हाम्रो संस्थापक कागजातहरूको सबै भन्दा राम्रो सुविधाहरू समेट्छ, र अमेरिकाको सबैभन्दा उत्तम यसको विविधता प्रतिबिम्बित हुन्छ। यसको विपरीत, सबैभन्दा खराब प्रतिबिम्बित हुन्छ जब कुनै समूहले आफ्नै छविमा "अमेरिकी" परिभाषित गर्न प्रयास गर्दछ। दुर्भाग्यवस, केहि होटल मालिकहरूले आफ्नै आफ्नै अमेरिकी संस्करण "अमेरिकी" वर्णन गर्न कोशिस गरे। २००२ को अन्त्यमा न्यु योर्क शहरमा होटल पेन्सिलभेनियाले “अमेरिकी स्वामित्वको होटेल” भन्ने प्रवेश द्वार ब्यानर जडान गरेपछि मालिकहरूले आलोचनालाई बेवास्ता गर्ने प्रयास गर्दै व्याख्या गरे, “अमेरिकी स्वामित्वको मुद्दा मूलत: अन्य होटेलहरूमा भिन्न छैन। हामी हाम्रा पाहुनाहरूलाई अमेरिकी अनुभव प्रदान गर्न चाहन्छौं। हामी चाहन्छौं कि मानिसहरूले जान्न कि तिनीहरू एक अमेरिकी अनुभव प्राप्त गर्नेछन्। अन्य होटलहरू के हुन् वा के होइनन् भन्नेमा हामीलाई खास चासो छैन। ”
यो व्याख्या यो गलत हुन्छ को रूप मा प्राप्त हुन्छ। आफ्नो सांस्कृतिक विविधतामा गर्व गर्ने देशमा "अमेरिकी अनुभव" के हो? के यो सेतो रोटी, तातो कुकुर र कोला मात्र हो? वा यसले सबै कला, संगीत, नृत्य, खाना, संस्कृति र गतिविधिहरू समेट्छ जुन विभिन्न राष्ट्रियता र नागरिकहरूले अमेरिकी अनुभवमा ल्याउँदछन्? तिमी कत्ति धेरै अमेरिकी पाउन सक्छौ? ”
आज AAHOA संसारकै सबैभन्दा ठूलो होटेल मालिकहरूको संघ हो। यसका अमेरिकी नागरिक सदस्यहरू संयुक्त राज्यमा प्रत्येक दुई होटल मध्ये एकको स्वामित्वमा छन् अरबौं डलर सम्पत्ति सम्पत्ति र सयौं हजार कर्मचारीको साथ, एएएचओएको स्वामित्व प्राप्त होटलहरू संयुक्त राज्य अमेरिकाको लगभग सबै समुदायमा मुख्य योगदानकर्ता हुन्।
मेरो किताब "ग्रेट अमेरिकन होटियर्स: होटल उद्योगको अग्रगामी" बाट उद्धृत
लेखक घर २००
रुजवेल्ट न्यू ओर्लिन्स होटेल (१ 1893 XNUMX)) चोरिएका वस्तुहरूको फिर्तीलाई प्रोत्साहित गर्दैछ
त्यस्ता वस्तुहरू फर्काउने सहभागीहरू $ १,15,000,००० भन्दा बढी मूल्यको होटलको भव्य प्रेसिडमेन्ट सुइटमध्ये एकमा सात-रात बसाई जित्न योग्य हुनेछन्। रुजवेल्टले होटलको ईतिहासको रेकर्डको रूपमा वस्तुहरू आफ्नो लबीमा प्रदर्शन गर्ने योजना बनाएको छ। "ऐतिहासिक गिटबैक प्रतियोगिता" भनिने अभियान होटलको १२ 125 औं जन्मदिन मनाउन शुरू गरिएको छ। पूर्व पाहुनाहरुसँग जुलाई १, २०१ 1 सम्म सामानहरू डेस्कटपमा राखेर वा मेलमा पठाउँदै फिर्ता गर्न पठाइन्छ, महाप्रबन्धक टोड चेम्बरले भने।
लेखक, स्टानले टर्केल, एक मान्यता प्राप्त अधिकारी र होटल उद्योग मा सल्लाहकार। उनले सम्पत्ति व्यवस्थापन, अपरेशनल अडिटहरू र होटेल फ्रेंचाइजी सम्झौताको प्रभावकारिता र लिटिगेसन समर्थन असाइनमेन्टमा विशेषज्ञता आफ्नो होटल, आतिथ्य र परामर्श अभ्यास सञ्चालन गर्दछ। ग्राहकहरू होटल मालिक, लगानीकर्ता, र ndingण दिने संस्था हुन्।
पूरा भएको नयाँ होटल पुस्तक
यो "ग्रेट अमेरिकन होटेल आर्किटेक्ट्स" शीर्षक हो र वारेन र वेटमोर, हेनरी जे। हर्डनबर्ग, शुत्जे र वीभर, मेरी कोल्टर, ब्रुस मूल्य, मुलिकेन र मोलर, म्याकिम, मीड र व्हाइट, क्यारेर र हेस्टिंग्स, जुलिया मोर्गनको मनमोहक कथाहरू बताउँदछ। , एमरी रोथ र ट्रोब्रिज र लिभिन्स्टन।
अन्य प्रकाशित पुस्तकहरु:
महान अमेरिकी होटियर्स: होटल उद्योग को अग्रगामी (2009)
• अन्तिममा निर्मित: १००+ न्यूयोर्कमा वर्ष-पुरानो होटेल (2011)
• अन्तिममा निर्मित: १००+ वर्ष पुरानो होटेल मिसिसिपीको पूर्व (2013)
• होटल माभेन्स: लुसियस एम। बुमर, जर्ज सी। बोल्ड्ट र वालडोर्फको ऑस्कर (2014)
• महान अमेरिकी होटियर्स भोल्युम २: होटेल उद्योगका अग्रगामीहरू (2016)
• अन्तिममा निर्मित: १००+ वर्ष पुरानो होटेल मिसिसिपीको पश्चिम (2017)
होटल माभेन्स भोल्युम २: हेनरी मोरिसन फ्लेगलर, हेनरी ब्राडले प्लान्ट, कार्ल ग्राहम फिशर (2018)
यी सबै पुस्तकहरू पनि भ्रमण गरेर लेखकहाउसबाट अर्डर गर्न सकिन्छ stanleyturkel.com र पुस्तकको शीर्षक क्लिक गरेर।